SIDA LOO ABUURO OO U KORAAN NOOCYO OF PEAR QALABKA XANAANADA EE UU BEERTA - KU'SAABSAN
Ugu Weyn Ee Ku'saabsan
Beeraha Carruurta: sharaxaada kala duwan, beerashada iyo daryeelka
Waxaa ka mid ah noocyada xagaaga ee isteroberi, The pear Nursery waxaa loo tixgeliyaa ugu horreyn, taas oo sidoo kale waa xusuusin leh gaar ahaan dhadhanka macaan iyo dhalidda wanaagsan. Sababtan awgeed, waxaan hoos ku eegeynaa faahfaahinta sifooyinka kor u qaadaya jardiinooyinka xanaanada, sidaa daraadeed ninkii beerta oo idil wuxuu qurxin karaa goobtiisa.
Taariikhda abuuritaanka noocyo isteroberi ah carruurta
Noocyada ugu horreeya ee pear-ka ee noocyada kala duwan ee Nursery ayaa laga helay Iskuulka Dhamaan Ruushka ee Moscow, halkaasoo ah juujiyayaasha Yu. A. Petrov iyo N. V. Efimova ayaa ka shaqeeyay. Si aad u hesho pear-self-fruited, isbaheysi iskudhaf ah lambar sideed iyo noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'Dyushesa Baaskiillada xagaaga ayaa la soo dhaafay. Iyadoo ay sabab u tahay Bisaylkiisa hore ee degdegga ah iyo dhadhanka dhadhanka ah ee miraha waaweyn, kala duwanaanshahan ayaa noqday mid baahsan oo hadda si weyn u koray qaybta dhexe ee Russia iyo Ukraine oo dhan.
Astaamaha noocyada kala duwan ee pear carruurta
Marka la eego sifooyinka dibedda, ma aha mid aad u fudud in la helo noocyada kala duwan ee Carruurta, tan iyo labadaba geed iyo qaabka dibadda ee midhaha ayaa ku jira siyaabo badan oo la mid ah noocyada kale xagaaga, gaar ahaan qaraabada Dushes. Laakiin si kastaba ha ahaatee, sifooyinka qaarkood waxay u muuqdaan kuwo istaahila dareenka.
Caruurta caruurtu waa noocyo kala duwan, tan iyo dhererka dhirta kala duwan ee noocaan ah waxay gaari kartaa ilaa 3-4 mitir. Xayawaanka Pear waxaa lagu kala gartaa samaynta horraanta taajka, taas oo geed weyni ku leedahay qaab jamac ah. Ma jiraan laan badan oo taajka ah, laakiin waxay yihiin kuwo aad u xoog badan oo qarsoodi ah. On laamaha waxaa jira qadar weyn oo ringworms ah, kaas oo aan yarayn fruiting badan oo la sameeyey.
Caleemaha dhirta oo dhan waxay leeyihiin qaab muuqaal ah, iskala socdaa. Waqti ka dib, waxay noqdaan kuwo aad u qaro weyn, oo leh jilif buni ah. Laga soo bilaabo guga, laamood waxay ku badan yihiin caleemo cagaaran oo madow. Qaababka caleemaha waa oval, waxay leeyihiin dusha iyo jajabyo jilicsan.
Ma taqaanaa? Faa'iidada ugu weyn ee geedaha geedka Caruurtu waa dhererka geed, taas oo xajistay awooda ay ku dhalin karto wax-soo-saarka caanaha in ka badan 20 sano.
Carruurtu waxay leeyihiin wax soo saar sare, taas oo sannado wanaagsan la gaari karo tirada 50-60 tan oo leh beeraha beerta 1 hektar. Waxaa laga yaabaa in tani ma aha oo kaliya sabab u ah formation of badan oo miraha, laakiin sidoo kale sababtoo ah mass ee pear kasta, kaas oo miisaankiisu 60-80 g kasta.
Sidoo kale astaamaha soo socda ayaa ah mid ku habboon midhaha kala duwan ee pear carruurta:
qaab yar oo casaan-qaabeeya leh luuliyo sare;
dusha sare ee maqaarka;
midab madow oo leh calaacal casaan leh;
Dhexdhexaadintu waa dhexdhexaad dherer iyo dhumuc;
calyx dhexdhexaad ah;
abuurku waa yar yahay, midab madow ah;
Maqnaansho fara badan.
Saxarka ee pear this leeyahay hooska shimbir, iyo sidoo kale kala duwan yihiin juiciness aad u fiican iyo macaan macaan. Thanks to dabeecadaha dhadhan kala duwan yihiin qadarin. Intaa waxaa dheer, sida aynu hore u soo sheegnay, oo ka mid ah noocyada xagaaga, Koofiyadaha xanaanadu waxay leeyihiin bislaanshaha ugu horreeya ee miraha kaasoo noqonaya mid ku habboon isticmaalka aadanaha horaantii bishii Luulyo oo uu sii wadi kari waayey ilaa bartamihii August. Bisaylka aan isku midka ahayn wuxuu ka dhigayaa noocyada kala duwan ee isteroberi ee ku habboon guriga iyo ma beerashada baaxada.
Mashiinka bisil waxa uu ku habboon yahay isticmaalka cusub iyo dhammaan noocyada wax soo saarka. Waxay leeyihiin nolol shelf yar, sababtoo ah content sare ee sonkorta ee saxarka. Si kastaba ha noqotee, qaboojiyaha waxay raadinayaan raad cusub ilaa hal bil.
Dabiici ahaan, ninkii beerta ka shaqeeyaa ayaa xiiseynaya su'aasha ah in rijeetadu ay lagama maarmaan u tahay pear-ka xannaanada. Nasiib darro Kala duwanaanta noocaas ah waa qayb ahaan is-iskutallaabin, sidaas darteed joogitaanka bees waa mid aad muhiim u ah helitaanka goosashada munaasibka ah. Haddii aad soo iibsatay geedka hal sano jir ah ee xannaanada, ka dibna ubax ugu horeysa waxay ku iman doontaa oo kaliya 4-5 sano ka dib. Si kastaba ha noqotee, ka dib markaa soosaarku si joogto ah ayuu u fiicnaan doonaa.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka kala duwan
Qaar badan oo ka mid ah tayada wanaagsan ee Xerada Nursery ayaa hore u cadeeyay sharraxeeda, laakiin si ay ugu dambeyntii ugu qanciso baahida loo qabo beeritaanka noocyada kala duwan ee beertahayaga, aan ka dhigno dareenkaaga faa'iidooyinkaaga marka la barbardhigo noocyo kale oo pear ah:
caabbinta aadka u fiican ee degganaan la'aanta deegaanka;
Waxyaabaha sarreeya ee isbiirsaday dhadhan fiican leh;
sifooyinka wanaagsan ee dhirta;
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira isdabajarro iyo cilladahooda. Haddii aan isbarbardhigo midhaha kale ee noocyada kale, ka dibna waxay noqon karaan kuwo loogu yeero dhexdhexaad, inkastoo leh daryeel wanaagsan, cabbirka miro ayaa si weyn u kordhi kara. Intaa waxaa dheer, dhirta fasalkaan waxay u baahan yihiin dayactir joogto ah qaabka qaabab kala duwan. Sababtoo ah manjooyin, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la yareeyo dhererka geedka, iyo waxay siin doontaa xoog badan oo xooggeeda si formation miraha.
Qalabka qaar ka mid ah beerista carbiska pear
Miro Carruurta beerashada iyo daryeelka ma aha mid si xamaasad leh, inkasta oo qaar ka mid ah shiiqyada beertooda ay wali qiimo ku ogyahay. Ka dib oo dhan, si aad u hesho geed miro wanaagsan, waa in marka hore la beeray iyo koray in muddo ah miro.
Taariikhda soo dagista iyo xulashada goobta
Beerta ilmana ah ee kala duwan ee carruurta ayaa lagu beeray karaa horraanta gu'ga, ka hor inta aaney dhaqdhaqaaqa casiirka geedka, ama xilliga dayrta, marka socodka dheecaanku horey u istaagay. Si kastaba ha ahaatee, bannaanka u badan ayaa ku adkeysanaya xaqiiqda ah pear si fiican u beeray dayrta, dhammaadka September. Dhirta xayawaanka waxaa badanaa ku yaalla qaybta koonfureed ee goobta, inkastoo ay sidoo kale qaadan karaan meel bari ama galbeed. Waa ka fiican tahay haddii laga beero abuurka jareerka ah ee la sameyn doono kor u kaca ama jilicsan, tan iyo markii la beerto dhul hoose, biyaha dhulka ayaa laga yaabaa inay kor u kacaan xididdada geedka, taas oo ah natiijada laga yaabo in ay qudhmi karto (pear-ka dadka waaweyn, 7 mitir).
Fikrad gaar ah waa in la siiyaa ciidda: waa in aadan beeranin pear tan ku yaal aalad caano leh, ciidda dhoobada ah ama ciid, maadaama ay weli dhici karto inaysan degeynin, laakiin xitaa kuma riyoon doontaan goosashada wanaagsan. Noocyada noocaan ah, noocyada ciidda ee doorbidan waa:
kaynta cawska leh loamy subsoil;
Waa muhiim! Haddii aad rabto, dabcan, waxaad si madax-bannaan u awoodi kartaa in aad ciidda ka dhigto goobahaaga aad ugu haboon tahay beeritaanka iyo kordhinta isbeddelada kala duwan ee xanaanooyinka. Ujeedadaas awgeed, waxaad ku dari kartaa bacriminta madow, ama ka saari badi carrada dabiiciga ah kana buuxi booskiisa bacrin ah. Si kastaba ha ahaatee, fadlan ogow in ay lagama maarmaan tahay in la bacrimiyo cayayaanka sida ugu badan ee suurtagalka ah, tan iyo geeddi-socodka koritaanka kalluunka wuxuu u baahan doonaa nafaqooyin badan oo ka badan, sidaa daraadeed carrada dabiiciga ah ee dabiiciga ah ayaa si degdeg ah u noqon doona mid sabool ah.
Hawlaha diyaarinta ka hor intaan la dhicin
Haddii aad rabto inaad ku beerato noocyo kala duwan oo isteraris ah carruurta, ka dibna waa wax aad u qoto dheer in tan la sameeyo xilliga dayrta, taas oo u oggolaan doonta geed in ay "adag tahay" oo noqoto mid u adkaysta cudurrada iyo heerkulka hooseeya. Dhibaatada keli ah ee soo degitaanka waa baahida loo qabo in lagu diyaariyo hoy ku filan oo loogu talagalay seedling, kaas oo xilliga qaboobaha lagu weerari karo jiirka iyo laga yaabo inay qabaan heerkul hooseeya. Laakiin maaddaama dhibaatooyinka noocaas ah ay si buuxda u caddeeyeen, weli waa lagama maarmaan in ay si toos ah ugu foorarsadaan caynkaas oo kale, diyaarinta taas oo ay lagama maarmaan tahay:
Iibso 2-sano oo ah sapling, oo dooranaya nuqul aan lahayn qalalan ama xididdo lakabka leh. Xitaa ma jiraan wax dhaawac ah oo ku dhaca jiritaanka seedling.
Maalinta ka hor laga beeri doono, abuurka ayaa lagu talinayaa in lagu rusheeyo 12 saacadood biyo diirran, kaas oo u oggolaan doona xididada inay soo kabtaan oo ay isku diyaariyaan qalabaynta goobta cusub ee koritaanka.
Ceelka ayaa horay loo diyaariyey - 3-4 toddobaad ka hor inta laga beerto seedling. Haddii aad isku diyaarineyso beeritaanka guga, ka dibna diyaargarowga ceelka waa in la bilaabo dayrta, taas oo u oggolaan doonta ciidda in ay degto iyo sidoo kale suurto gal.
Waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo dalool dalool ah oo tixgelinaya nooca ciidda. Haddii ay ku haboon tahay pear ah, godadka ayaa laga yaabaa inay ka yara yaraato mugga xididada cabbirka. Si kastaba ha noqotee, haddii ay jirto baahi loo qabo bacrinta dheeraadka ah, cabbirka godadka waa in uu ahaado 0.7 x 0.7 m ballaaran iyo 1 mitir qoto dheer.
Isla markiiba si tartiib tartiib ah u garaac xagga hoose ee ceelka si ay kor ugu kiciso ugu yaraan 0.5 mitir ka sarraysa dusha ciidda. Waxaan isaga ku xiri doonaa seedling dhalinyarada ka dib markii laga beerto.
Si carrada aad ka heshay godka, ku hayso 30 kg oo ah compost (waxaad bedeli kartaa peat ama digada, oo aad mar horeba maamusho perepret), 1 kg of superphosphate, 0.1 kg ee chloride potassium. Shan kala badh ka mid ah isku dar ah ee laga helay hoose ee ceelka iyo tampi hoos, oo ku shub intiisa kale slide ku dhow huuriga.
Si loo xaqiijiyo badbaadada ugu badan ee abuurista, ka hor inta beerto, diyaariso mashiin dhoobo taas oo ay lagama maarmaan tahay in la yareeyo xididdada pear. Xididdada sapling si aad u qoyan oo sidan ah ayaa loo dhigayaa dhinaca woqooyiga dooxada qulqulaya ee hoose ee ceelka oo ku faafay tuulada, iyadoo isku dayaysa in ay siiso meel dabiici ah. Taas ka dib, xididdada waxaa lagu daboolay ciidda bacrin ah. Si looga hortago hawo-mareenka ceelka iyo inta u dhaxeysa xididada, waxay ubaahan tahay in la yareeyo, si loo hubiyo qaybinta dabiiciga ah ee ciidda. Waxa kale oo muhiim ah in la tumo ciidda, iyaga oo ku socda dhaqdhaqaaqooda ka soo gooyay seedling ilaa cidhifyada godka. Sidoo kale ka feker in qoorta asalka ah ee marxaladdan aan ka soo bixin korka dusha sare, laakiin marka aad ku shubeyso seedling leh 2-3 baaldiyo biyo ahna ciidda xajiya, waa inay soo baxaan 4-5 cm. Dhammaadka beeritaanka, geedo geedo geedo ah pear waa khasab mulch goobo. Ujeedadaas, waxaad isticmaali kartaa peat, balka iyo humus, oo abuuraya lakabka mulch ee 5-10 cm. Ha iloobin inaad xirto pear yar yar ee dantooda.
Haddii dalaggu la fuliyo xilliga gu'ga, markaa dhamaan shayada kor ku xusan waa kuwo soo noqnoqda. Faraqa keliya ayaa ah in seedling uusan u baahneyn lakabka noocan oo kale ah ee mulch (waxaad samayn kartaa iyada oo aan). Isla mar ahaantaana waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo hillock ah wareegga geed, taas oo ka hortagi doonta faafidda qoyaanka, si joogto ah u biyo u biyo 2-3 baaldiyo biyo.
Qaar ka mid ah talooyin ku saabsan daryeelka Pear Baby
Inta badan dareenka naftooda waxay u baahan yihiin geed yar, sababtoo ah waxay sii xoogeeyaa oo waxay u baahan tahay nafaqooyin badan oo nafaqo leh si koritaanka firfircoon. Tixgeli dhamaan sifooyinka daryeelka.
Sida loo nadiifiyo isteroberi
Haddii aan ka hadlayno sapling yar yar, ka dibna tan iyo guga waxay u baahan doontaa waraabin joogto ah. Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maahan in geedku macno ahaan u baahan yahay in la daadiyo biyo. Qoyaanka waa in la soo bandhigaa marka ciidda ay soo baxdo, iyo haddii guga uu roobku ku filanyahay oo uu geedku muujiyo dhammaan calaamadaha soo nooleenta, ka dibna waraabinta waa la iska ilaalin karaa. Waxaa habboon in ay ku soo noqoto xagaaga, marka cimilada kulul aysan aheyn mid aad u adag in la dhigo 2 baaldiyo biyo nadiif ah maalin walba geed kasta. Xilliga dayrta, xaddiga waraabinta ayaa sidoo kale hoos u dhacda, taas oo u oggolaanaysa seedling inay si deg deg ah u joojiso socodka casiirka iyo diyaarinta jiilaalka.
Maxaa iyo goorta la bacrimiyo isteroberi
Dharka ugu sareeya ee pear yar yar waa lagama maarmaan, sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo inta lagu jiro muddada dhammaan dhirta. Tixgeli kaliya in labada sano ee ugu horreeya pear ma u baahan doonaa quudin dheeraad ah oo dhan, tan iyo intii lagu beeray aad u keenay qadar ku filan nafaqooyinka. Laakiin muddadan ka dib sannad ayaa ku qasbanaan doonta inay ku bixiso qiyaastii shan cunto:
Ilaa ay socodka dheecaan bilaabmayaa, geedka waxaa lagu buufiyaa xal of HOL. Haddii aanay suurtagal ahayn in la fuliyo, ka dibna nitrogen waxaa lagu soo saaraa hoostiisa, taas oo xal la mid ah laga bilaabo HOL, nitrate ama digada digaaga la isticmaali karo.
Bishii May, markii ubax la dhammeeyey, bacriminta cagaaran waxaa lagu dabaqayaa qashinka 10 cm oo qoto dheer, oo lagu beddeli karo xalka Nitroammofoski ee xoogga saarka 1: 200. 3 baaldiyo ee xalalka noocan oo kale ah ayaa loo baahan doonaa hal geed.
Quudinta labaad ee nitrogen waxaa la fuliyaa dhammaadka Juun, laakiin waa in lagu fuliyaa buufinta foliar. Waxaa lagu soo celiyaa Luuliyo.
Dhamaadka July, ma noqon doonto mid aad u adag in la quudiyo pear leh fosfooraska iyo potassium. Bacriminta Kuwaas waxaa lagu dabaqaa qaabka xalalka hoos yimaada.
Bartamihii Sebtembar, dharka ugu dambeeya waxaa la sameeyaa, kaas oo ka kooban mashiinka kale ee geed oo leh HOL.
Sida loo leexiyo pear
Si aad u dhisto geedkan beerta si sax ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid xeerarka soo socda:
Waqtiga ugu wanaagsan ee manjooyin waa guga, halka casiirkuna uusan weli ku socon geed, iyo heerkulka hawada uusan hoos udhicin -8 ° C.
Xilliga xagaaga, manjooyin sidoo kale waa la oggol yahay, laakiin waxaa la fuliyaa haddii ay dhacdo xaalad deg-deg ah - marka taajkii geedku aad u qaro oo aaney u oggolaan in midhaha si siman u bislaadaan.
Haddii ay lagama maarmaan tahay in la xoqdo mid ka mid ah caleemaha sare ee geed, ka dibna tan waxaa sidoo kale lagu sameeyaa xagaaga, bisha June.
Xilliga dayrta, manjooyin ayaa la sameeyaa oo keliya haddii ay lagama maarmaan tahay in la soo saaro laamoodo dhaawacan ama jirran. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo waqti dheer ka hor inta uusan dhaxan, tan iyo meesha la gooyey waxay noqon doontaa mid aad u xasaasi ah qabow.
Waa muhiim! Xilliga jiilaalka, isteroberi manjooyin waa mid aan la aqbali karin, maaddaama habka noocaas ahi u horseedi karo dhimashada geedka.
Manjada ugu horeysay waxaa la samayn karaa sanadka ugu horeeya ee koritaanka geed. Waxaa loo sameeyaa si looga tago oo keliya lafaha qalfoof ee taajka oo u oggolow inay u noqdaan kuwo aad u yaryar. Sidoo kale sanadka kowaad waxaa lagu talinayaa in la soo gaabiyo kormeeraha xarunta, ka saarida afaraad ee dhererkeeda. Sannaddii labaad ee koritaanka pear, kormeeruhu wuxuu mar kale yeelan doonaa in la gaabin by 25 cm, sii wadaan in ay sameeyaan taajkii, iyo sidoo kale gaabin dhererka laamood qalfoof. Maskaxda ku hay in, oo ku saleysan dhererka lafaha bidix, taajkii geedku waa inuu yeeshaa habka jiilaalka soo jiidashada leh.
Sida loo xoqo qoryihii hore, waxay badanaa ku lug leedahay saarista laamaha shakhsiga ah, taas oo iftiiminaysa oo dib u dhisi doona taajka. Isla mar ahaantaana, waa in la soo saaraa laamo dheeraad ah, taas oo sidoo kale, daciif ah iyo wax soo saar yar.
Sida loo ilaaliyo pear cudurada iyo cayayaanka
Dhammaan noocyada isteroberi ayaa u nugul tiro badan oo cuduro ah, si ay u badbaadiyaan taas oo ah geed yar oo beerta weyn ku dhowaad aan macquul ahayn. Kaliya farsamo ahaan processing, taas oo xitaa buufinta hore ee geedka geedo leh HOL wuxuu noqon karaa mid caawin kara. Haddii aad dib u dhigto arrintan oo kudhihihii ugu horreeyey ee hore u soo baxaan geedka, ka dibna halkii Hure waxaad isticmaali doontaa diyaargarow gaar ah (HOL waxay gubi kartaa kelyaha dhalinyarada):
Laakiin haddii ka hortagga aysan soo saarin natiijooyin iyo calaamadaha ugu horreeya ee cudurada u muuqda geedka, markaa waa in la tirtiraa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aysan u baabbi'in dalagaaga.
Ma taqaanaa? Waxaa fiican in aan ku beeri isteroberi beerta isku mid ah halkaa oo koraya. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ash buur iyo pear ay saameeyeen cayayaanka isku mid ah, waxaana lagu gartaa cudurada isku midka ah. Sidaa darteed, geedka jiirka yar wuxuu noqon doonaa mid aad u adag in laga ilaaliyo cudurrada.
Waxaa sidoo kale mudan in la xuso in xilliga jiilaalka, isteroberi waxaa soo weeraray cayayaanka oo si buuxda u jeexjeexi lahaa lakabka oo dhan ee jilif ka jirridda. Si looga hortago tan, waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo qubuunta dhulka iyo ilaa dhererka illaa mitir leh warqad qaro ama maro, ka dib markii lagu qalajiyo qalab khaas ah oo ka cabsiin kara jiirka. Intaas waxaa dheer, waxaa muhiim ah in la tuuro xaddiga ugu badan ee barafka ku yaala wareegga garabka.
Ka ilaalinta geedaha yar yar xilliga qaboobaha
Cabbiraadda barafka ee carruurta waa mid aad u sarreeysa, sidaa daraadeed geedo qaangaar ah ayaa si sahlan u qaboobi kara jiilaalka cimilada dhexe. Laakiin halkan geedo yar yar, kuwaas oo la beeray oo kaliya guga ama dayrta, waxay u baahan doonaan hoyga khasabka ah. Ka hor intaan la gaarin cimilada qaboobaha, waa inay hubaal noqdaan kuwo si adag ugu xiran lakabka leylaha si ay cirbadaha loogu soo rogo. Dusha sare ee naqshadeynta waxaa lagu soo rogay qaro weyn. Hoyga noocan oo kale leh lakabka qaro weyn ee mulch ayaa si habsami leh u ilaalin doona carbiska carbinta carbiska laga bilaabo barafka iyo jiirka.
Khatar kale oo geedo yar yar oo jiilaal ah waa suurta galnimada sare ee laanta jaban ee culeyska barafka. Si looga fogaado tan, laamaha dhalinyarada waxaa lagula talinayaa in la jiido xariijin ilaa weelka oo ku xiran sidan ilaa guga. Haddii geedku yahay qof qaangaar ah, ka dibna waa inaad ruxineysaa barafka. Waxaan rajeyneynaa in macluumaadka la soo bandhigay ay kuugu dhaceen jacayl leh tan aan si aan caadi ahayn oo casiir leh oo casiir leh oo jimicsi leh, oo aad dhawaan u degi doontaa beertaada. Haddii aad siisid seedlingka daryeelka saxda ah, ka dib markaad 4-5 sano ka dib waxaad tijaabin kartaa miskahaaga.
Dhirta nooca loo yaqaan 'decorative': magacyada wakiilada caanka ah
Noocyo kala duwan oo aan lahayn qaladaad - "Shumac Kabaha" yaanyo: sharaxaad iyo sawir
Sida loo doorto ciidda ugu wanaagsan ee loogu talagalay geedo yaanyada iyo basbaaska? Guudmarka isku dheelitirka ugu caansan
Ruushka horeba wuxuu leeyahay sharciga ilaalinta xayawaanka
Waxyaabaha muhiimka ah: sida loo daryeelo guriga barbaarinta ka dib iibsashada ka dib?
Karootada waxaa ku jira qadar fara badan oo fitamiino iyo xubno raadraac ah oo faa'iido u leh jirka bini'aadamka. Waa hab fiican oo lagu ilaaliyo caafimaadka wanaagsan ee dadka waaweyn iyo carruurta. Si looga faa'iidaysto dabacasaha, ma aha oo kaliya xagaaga, laakiin sidoo kale xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato shuruudaha ay tahay in la dhigo oo la dhigo. Read More
Strawberries oo aan lahayn nematodes
Cagaarka digada: Guryaha dawooyinka, isticmaalka, khatarta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ku'saabsan 2019